RSS EDT 21:12
• हुम्लामा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना • निर्वाचनमैत्री वातावरण तयार भएको छ : रेग्मी • जोखिममा परेकाहरूको हेलिकोप्टरबाट उद्धार • आयोगको अर्जुनदृष्टि निर्वाचनमा • पूर्वराजाले भने, 'राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै अग्रसर हौं' • एनआरएन छैटौं युरोपेली क्षेत्रीय बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा • एनआरएन अस्ट्रेलिया स्टेटबाट को-को चुनिए ? • मनले नेपाली, तनले अस्ट्रेलियाली • बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई ४० हजार राहत • साल्ट टे्रडिङमा चटयाङ पर्दा लाखौँ क्षति • विमान खरिदः सञ्चय कोषसँग रु १० अर्बको ऋण सम्झौता • यस्तो छ निर्वाचन आयोगको चुनावी कार्यतालिका ﻿
Links Exchange	Life Style काठमाडौंदेखि लुम्लेसम्मजनक तिमिल्सिना धुलो, धुवाँभित्र निस्सासिएको जीवनबाट मुक्ति पाइने, केही दिनलाई भए पनि अफिसको कामबाट छुटकारा पाइने भएकाले घुम्न जाने भन्नेबित्तिकै म हिजैदेखि फुरुङ्ग परेको थिएँ । किनभने करिब २/३ साताको अथक परिश्रमपश्चात् हामीले पोखरा-लुम्ले तीन दिने भ्रमणको तयारी सकेका थियौँ । तीन दिन उपत्यकाबाहिर साथीहरुसँगै आनन्द लिन पाइने भए पनि ममा उत्साह र जाँगर थपिएको थियो ।चार दिन यताका तयारीहरुको बीचबाट योजना सफल भएकोमा म र मेरो टीमका साथीहरु दंग थियौँ । हाम्रो भदौ ५ गते काठमाडौंबाट पोखरा लुम्लेको भ्रमणका लागि निस्कियौं । करिब ५ हजार पकेट खर्चसहित । भदौ ५ गते बिहान सात बजे योजनाअनुरुप, हामी निर्धारित गन्तव्यमा पुग्नका लागि काठमाडौंको अनामनगरबाट बसमा चढ्यौं । कोही साथीहरु पुगिसकेका थिए । कोही जम्मा हुँदै थिए । ७:४८ बजे अनामनगरबाट हामी पोखराका लागि रवाना भयौँ । बस नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर हुँदै कालिमाटीबाट थानकोट कट्यो । यससँगै धुँवायुक्त काठमाडौँको प्रदूषणयुक्त ठाउँबाट हामी निकै टाढा पुग्यौँ । भ्रमण टोलीमा ३८ जना सदस्य थियौँ । हामी चढेको बा १ प ७९० नम्बरको बस बिहानको ८ः५० मा थानकोटपछि पहाडी नागबेलीहरुलाई छिचोल्दै ओरालो र्झन थाल्यो । काठमाडौँदेखि लगभग ३ सय ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको पोखरा हाम्रो पहिलो दिनको गन्तव्य थियो । बसको झ्यालबाट माथिमाथि पहाडतिर देखिने बादलका केही झुप्पा पहाडमा अडेस लागेका थिए । ओरालोका नागबेली छिचोलिरहँदा सुरिलो हावा, मकैका बारी, झुप्रे बस्ती भिरालो डाँडामा चिटिक्क परेका घर, वरपरका साना र आकर्षक थुक्का एक दुई घर झनै मोहक थिए । बाटोभरि कटेज र छुपे्र पसलहरु पनि सुन्दर देखिन्थे ।गाडी केही समय ओरालो झरेपछि नदी किनारमा हुइँकिन थाल्यो । मोबाइलमा सुरिलो गीत बज्दै थियो, "यो मौसम यो हरियाली ।’ संगीतको सुरिलो धुन र सिरिरी बहने हावासँगै मितेरी गाँस्दै हामी निरन्तर नदी किनारको यात्रामा रह्यौँ । अग्ला डाँडाहरुको फेदीबाट नागबेली बनेको सडक र तलतिर सुस्साइरहेको त्रिशुली निकै मोहक देखिन्थ्यो । बिहानको खानाको लागि हामी पूर्व निर्धारित योजनाअनुरुप मलुखेस्थित रिभरसाइड रेष्टुरेन्टमा पुग्यौँ । त्यहाँ खाना खाएर केही बेर आराम गर्‍यौँ । त्रिशुलीको नदीको छेवैमा पर्ने भएकाले साथीहरु नदी र पहाडलाई पर्दा बनाएर फोटोहरु कैद गरिरहेका थिए । दृश्यहरु लोभलाग्दा थिए । त्यसपछि हाम्रो यात्रा पुनः गन्तव्यस्थानतिर सोझियो । हामीले मुग्लिनको पुल काटेर त्रिशुली किनारको यात्राको बिट मार्दै मस्र्याङदी किनारमा हुइँकिन थाल्यौँ । तल मस्र्याङदी सुस्साइरहेको थियो । सबै साथीहरु रमाइलो गरिरहेका थिए । कोही गाउँदै, कोही नाच्दै थिए । स्थिर त कोही पनि थिएनन् ।मस्र्याङदी नदीको किनारको यात्रामा रहँदा बाटोमा पहाडी भूभागको बाटोमाथि बगिरहेको सुन्दर झरना देखियो । गुरुजीले गाडी रोक्नुभयो । हामी सबै झर्‍यौँ । साथीहरुलाई छाँगालाई हेेेरेर मात्र चित्त बुझेन । अनि त्यही पानीमा डुब्लकी मार्न समेत भ्याए । केही स्न्याप फोटो खिचेपछि हामी पुनः गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौँ । एउटा रमाइलो अनुभूति भइरहेको थियो । मस्र्याङदी किनारै-किनारको यात्रामा निकै रमणीय ठाउँहरु रहेछन् । झरनामा भिजेका साथीहरुलाई लुगा फेर्न र केही सामान्य नास्ता गर्नका लागि हामी घाँसीकुवा भन्ने ठाउँमा रोकियौँ । हाम्रो यात्रामा रहनु भएका कलेजका सरहरुले केरा र अम्बा किनेर सबैलाई बाँड्नुभयो । भिजेका साथीहरुले ड्रेस फेरे । गाडी पुनः अगाडि बढ्यो । दमौली, ब्यास बजार, पिपलटार, खैरनीटारलगायतका ठाउँहरु हुँदै साँझ करिब ६ बजे हामी पोखरा पुग्यौँ । चारैतिर हरियाली देखिने अनि बादलले ढाकेका पहाडमा थुक्काहरु मनै लोभ्याउने खालका थिए । पोखराको अजीब सौन्दर्यले मोहनी लगाइरहेको थियो । वाह, हाम्रो पोखरा ! सुन्दर पोखरा !! जसलाई शब्दका उन्न सकिदैन, भावमा व्यक्त गर्न सकिदैंन । हामी पोखरा पुगेलगत्तै विन्ध्यवासिनी मन्दिर घुम्न जाने निर्णय भयो । तर, केही साथीहरुले विभिन्न कारण देखाउँदै नजाने भनेर अड्डी कसे । तर, हामी सबै मन्दिर गयौँ । बजारको एक कुनामा पर्ने यो मन्दिर सुन्दर र आकर्षक डिजाइनमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ हामीले तस्बिर खिच्यौँ र पुनः अगाडि बढ्यौँ । हामी पहिलो दिन नै केही भ्रमणका निश्चित गन्तव्यहरु सिध्याउन चाहन्थ्यौँ । त्यस कारण हामी लगत्तै महेन्द्र गुफा गयौँ । यो त प्राकृतिक रुपमा नै निर्माण भएकोले झनै आकर्षक थियो, अँध्यारो अनि यस गुफाको छत माथिबाट पानी वषिर्रहेको । पोखरामा रहेको यो पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो, जहाँ वर्षेनी हजारौँ पर्यटकहरुले यसको भ्रमण गर्दछन् । हामी गुफाबाट बाहिर निस्कदा सिमसिमे पानी वषिर्रहेको थियो । गुफाको भ्रमण सकेर हामी नजिकैको क्याफेमा चिया नास्ताका लागि बस्यौँ । साथीहरुले घोडचढीको आनन्द लिए । त्यसपछि हाम्रो यात्रा सेती खोँचतिर मोडियो । हामीले सेती खोँचमा गएर सानो नहरजस्तो खोँचमा ठूलो आवाज छोड्दै बगिरहेको सेती नदीको आनन्द लियौँ । त्यसपछि हामी पोखराको लेकसाइडस्थित पोखरा भिलेज रिसोर्टमा पुग्यौँ । साँझ ८ बजेतिर खाना खाएर हामीले केही समय विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर आनन्द लियौँ । र, हामी सुत्नका लागि पुनः भिलेज रिसोर्ट फर्कियौँ । ...........भोलिपल्ट बिहान ६ बजे सबै साथीहरु उठे । नुहाई धुवाई गरेर हामी फेवातालको बीच भागमा रहेको तालबाराही मन्दिरको दर्शन गर्न गयौँ । हामीले फेवातालमा डुंगा चढेर मन्दिरको दर्शन गर्‍यौँ । तालको बीचमा रहेको मन्दिर निकै सुन्दर रहेछ । त्यसपछि हामी बसेका पोखरा भिलेज रिसोर्टमा आयौँ । पोखराका केही ठाउँहरु घुम्न समेत बाँकी थियो । त्यसपछि हामी डेभिड फल्स हेर्न गयौँ । सेती नदी तुफानी गतिमा धेरै माथिबाट बजि्ररहेको दृश्य निकै सुन्दर थियो । यसलाई पातले छाँगाका रुपमा पनि चिनिन्छ । यो पनि पर्यकीय गन्तव्य हो । यहाँ साथीहरुले केही समय सपिङ पनि गरे । छाँगाको अवलोकनपश्चात् हामी १२ बजेका खानाका लागि लेकसाइडस्थित दुना टपरी रेष्टुरेन्ट पुग्यौँ । जहाँ जान फेवातालको किनारैकिनार जानुपर्दोरहेछ । प्राकृतिक सुन्दरतामा मोहित भएको हाम्रो टिम भावुक साहित्यकार बनेको थियो । कोही आफैँ गीतकार बनेका थिए भने कोही गायक । कसैलाई नयाँ कविता फुरिहेका थिए । मृदृभाषीहरु मनैभित्र संस्मरण बुनिरहेका हुँदा हुन् । दुना टपरीबाट विशाल फेवाताल एकै नजरमा अवलोकन गर्न सकिन्थ्यो । अब भने आफ्ना सामनाहरु प्याक गरेर लुम्लेका लागि अगाडि बढ्यौँ । बस नदी किनारका बस्ती हुँदै उकालीहरु छिचोल्न थाल्यो । बेजोडसँग हावा बहिरहेको थियो । पोखराबाट ३४ किलोमिटर दूरीमा रहेको लुम्लेमा कृषि प्राविधिक फार्म छ । जसलाई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कृषि वैज्ञानिक खोज हुने स्थानका रुपमा लिइन्छ । हामी त्यही कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा बस्यौँ । साँझ खाना खायौँ । केही समयको रमाइलोपश्चात् हामी करिब १२ बजेतिर सुत्यौँ । रमाइलो त के भने, यहाँ जुका लाग्ने भएकाले साथीहरु कोही रोइरहेका त कोही हाँसिरहेका थिए । भोलिपल्ट ६ बजे उठ्यौँ । ७ बजे खाजा खाएर हामी पोखरातिर रवाना भयौँ । त्यसपछि हाम्रो यात्रा काठमाडौँतिर सोझियो । पुनः त्यही सुन्दर र मोहन नागबेलीहरु पछ्याउँदै गाडी काठमाडौंका लागि अगाडि बढ्यो । हामीले घाँसी कुवामा गाडी रोकेर केही नास्ता खायौँ र पुनः अगाडि बढ्यौँ । मुग्लिन हुँदै मलेखुको रिभरसाइड रेष्टुरेन्टमा हामीले तेस्रो दिनको बिहानको खाना खायौँ । खाना खाइसकेपछि पुनः हामी काठमाडौतिर अगाडि बढ्यौँ । गाडी रफ्तारमा कुदिरहेको छ । साँझ ७ बजे हामी काठमाडौं आइपुग्यौँ । सबै साथीहरु आ-आफूलाई पायक पर्ने ठाउँबाट घरतिर लागे । उपलब्धिका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण रहृयो भ्रमण । Last Updated : 2012-02-29 06:14:40 | Text Size : Print E-mail Related Photos
-› मुस्ताङका सम्पति जीर्ण अवस्थामा
दस उत्कृष्ट गन्तव्य सूचीको तेस्रो स्थानमा परेको उपल्लो मुस्ताङका पुराना गुम्बा संरक्षणको पर्खाइमा छन् । लोन्ली प्लानेट ट्राभल गाइड बुकद्वारा तयार सो सूचीको तेस्रो स्थानमा परेको उपल्लो मुस्ताङका छुसाङ, चराङ, सुर्खाङ, घमी, लोमान्थाङ, छोन्हुप र छोसेर गाविसमा १५ औँ शताब्दीमा निर्मित गुम्बा पर्यटकको मु
पूरा समाचार.... -› आधुनिक सभ्यताको मुहान ओझेलमा
पूरा समाचार.... Latest